कोरोना संक्रमणको तेस्रो चरण सुरु हुँदै गएकाेमा चिन्ता | Hamro Biratnagar
गृह पेज स्वास्थ्य कोरोनभाइरस कोरोना संक्रमणको तेस्रो चरण सुरु हुँदै गएकाेमा चिन्ता
कोरोना संक्रमणको तेस्रो चरण सुरु हुँदै गएकाेमा चिन्ता
कोरोनाको संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएर तेस्रो चरणमा प्रवेश भएको हो वा होइन भन्नेबारेमा अध्ययन गर्ने भएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण सबै समूहका मानिसमा देखिरहेको र ट्राभल हिस्ट्रीमा नदेखिएका व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण देखिन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो वा होइन भन्ने अध्ययन गर्न थालेको हो ।
नेपाल अहिले संक्रमणको दोस्रो चरण रहेको छ । सङ्क्रमित भएको व्यक्तिसंगको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा सङ्क्रमण सर्नुलाई दोस्रो चरण मानिन्छ । गत चैतमा विदेशबाट कैलाली घरमा आएका एक जनामा व्यक्तिबाट घरकै रहेका अर्को स्थानीय व्यक्तिमा सङ्क्रमण सरेपछि मन्त्रालयले नेपालमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो । संक्रमणको तेस्रो चरण भनेको समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको अवस्था हो ।
महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले अहिले ठूलो सङ्ख्यामा सबैमा सङ्क्रमण देखिन थालेपछि समुदायमा नै सङ्क्रमण फैलिएको कि भनेर अध्ययन गर्न थालिएको जानकारी दिएका छन् । यसअघि गत जेठमा महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको छ वा छैन भनेर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले उपत्यकामा समुदायस्तरमा संक्रमण नफैलिएको बताएको थियो । त्यतिबेलाभन्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ । मंगलबार मात्र उपत्यकामा ४८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
“संक्रमणको सूचक हेर्दा अहिले समुदायस्तरमा नै हो कि भन्ने देखाउँछ”, उनले भने, “अब अध्ययन गरेपछि मात्र समुदायमा सङ्क्रमण छ वा छैनन् भन्ने पुष्टि गर्दछ ।” महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन गर्न थालेको हो । अध्ययनका लागि महाशाखाले शुक्रबारसम्म कर्मचारी छनोट गर्ने र ती कर्मचारीलाई तालिम दिएर सातवटै प्रदेशमा रगत सङ्कलनका लागि पठाउने महाशाखा निर्देशक डा.पाण्डेले बताए ।
करिब एक महिनाभित्र समुदायस्तरमा फैलिएको हो वा होइन भनेर अध्ययन पूरा गरिने महाशाखाका निर्देशक डा. पाण्डेले बताए । “पहिले ट्राभल हिस्ट्री भएका मानिसमा मात्र संक्रमण देखिएको थियो”, उनले भने, “तर अहिले ट्राभल हिस्ट्री नभएका र समुदायमा रहेका व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौँमा नै ट्राभल हिस्ट्री नभएका मानिसमा संक्रमण देखिएको छ ।”
विदेशबाट आएका १५ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा संक्रमण देखिए पनि अहिले नेपालभित्रकै जो कोहीलाई पनि संक्रमण देखिन थालेको डा. पाण्डेको भनाइ रहेको छ । गत माघ ९ गते नेपालमा पहिलोपटक संक्रमण देखिएको थियो । अहिलेसम्म ४६ वटा प्रयोगशालामा सात लाख पाँच हजार ५६० जनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा ४० हजार ५२९ जना कोभिड– १९ को संक्रमण देखिएको छ ।
पिसिआर परीक्षण गरिएकामध्ये संक्रमण पुष्टि भएको दर ५.७ प्रतिशत रहेको छ । तीमध्ये सक्रिय संक्रमित १८ हजार ११२ जनामा रहेको छ । यस्तै २३९ जनामा संक्रमणका कारणले निधन भइसकेको छ । नेपालमा प्रति १० लाख ७.८ प्रतिशत मृत्युदर, संक्रमितमध्ये मृत्युदर ०.६ प्रतिशत रहेको छ । मोरङ, सुनसरी, बारा, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर र रुपन्देहीलगायतका १२ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २२ हजार १७८ जना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किसकेका छन् । अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने संस्थागत आइसोलेशनमा १० हजार ८३२ जना, होम आइसोलेशनमा सात हजार २८० जना र क्वारेन्टिनमा सात हजार ३९० जना रहेका छन् ।
अघिल्लो समाचारकाेराेना कहर- पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२ जनाको मृत्यु
अर्को समाचारकाठमाडौं उपत्यकामा भाद्र २४ सम्म निषेधाज्ञा
पर्सामा मास्क नलगाउने ४४२ जनालाई जरिवाना
दोहोरियो इतिहास : फेरी २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने
विराटनगरमा २४ जनासहित प्रदेश १ मा आज ५५ संक्रमित थपिए